Date My Pet » Soso-kevitra ny Mampiaraka Amin'ny Tinder sy ny hafa Mobile Apps
Last nohavaozina: Sep. 16 2020 | 2 min namaky
Nisy fotoana ny daty, roa vahoaka dia tsy maintsy hihaona ny olona tsirairay ao amin'ny; dia tonga mampiaraka an-tserasera; ary mampiaraka online manana sampana vaovao, izany finday tsia amin'ny alalan'ny fampiharana.
Ny roa taona farany no nanatri-maso fanombohana ny maro ny fampiharana toy izany; ny zavatra tsara indrindra momba ny ankamaroan'ny ireo fa fampiharana no azo alaina maimaim-poana.
Raha Tinder angamba no malaza indrindra afaka mampiaraka fampiharana, misy maro hafa koa ny ny karazany avy izay ampiasaina koa tena be; , toy Hinge, OkCupid, Nihaona Coffee Bagel, Be ny Fish, sy ny sisa.
Ireto ambany ireto ny soso-kevitra sasany fa tsy maintsy manaraka rehefa miaraka amin'ny Tinder sy ny fampiharana finday hafa.
Haka ny tsara sary: Tsy maintsy haka ny sary tsara irrespective fampiharana ny mampiaraka ampiasainao; tsara sary no fomba lehibe grabbing ny sain'ny mpiara-miombon'antoka ny mety mampiaraka. Na izany aza, manana ny marina sary lasa zava-dehibe kokoa raha toa ianao ka mampiasa Tinder, izay mifototra amin'ny sary fampiharana.
On Tinder, ny hahita ny tonga lafatra ny ankamaroan'ireo lalao miankina amin'ny sary mombamomba azy. Ny ratsy sary mombamomba mety hampitsahatra ny nantenaina ho tonga lalao tsy mampiseho bebe kokoa miahy anao.
Ny tena tsara, ny voalohany sary mombamomba anao ao amin'ny Tinder mampakatra tokony ho tsara tarehy sary ny tavanao, ny faharoa dia tokony haneho sary mombamomba ny tsanganany sy ny fahatelo misy afaka fisehosehoana ny fiainana na ny fialam-boly.
Zavatra iray tsy tokony hanao, indrindra raha toa ianao ka vehivavy, dia nampakaranao sary ny tena maha-ankizy; namoaka selfies sy cheesy Tit-tifitra tokony ho hofadina.
Tandremo rehefa manoratra ny mombamomba famaritana: Rehefa zava-dehibe ny hampiaraka, tsy tokony hiezaka mba hanangana mifono mistery Aura manodidina ny tenanao.
Tadidio fa na dia mampiasa ny mampiaraka fampiharana, ny tanjona farany dia ny olona fivoriana hiatrika-tava; izany, tsy misy hevitra mandainga na mampiseho ny tenanao ho toy ny olona tsy ianao.
Raha ny zava-drehetra momba anao tsy tsara, manao ny lisitry ny tena zava-misy momba anao mahaliana sy anjara azy ireo amin'ny famaritana ny mombamomba. Aza misalasala maneho eny facades mahavariana indrindra amin'ny fiainanao, ohatra raha manana asa na ny fialam-boly mahafinaritra, miresaka momba azy io amin'ny an-tsipiriany.
Afaka ny ho fisainana kely koa toy ny olona amin'ny kely foana hampanompo dia malaza kokoa.
Mamaly foana: Efa nandray ny hafatra ao amin'ny Tinder (na hafa mampiaraka fampiharana finday ampiasainao), fa ny olona nandefa ny hafatra toa tsy tena mahaliana anareo indrindra. Amin'ny toe-javatra toy izany, raha tokony ho fialana nandefa valin-, tsy maintsy mamela ny hafa ianao mahafantatra fa tsy liana.
Mianara ny fotoana ny hafatra: Ity tendron'ny ravin no zava-dehibe indrindra ho an'ny vehivavy; na izany aza, toe-javatra sasany, dia tokony hitandrina ihany koa ny momba ny fotoana ny hafatra dia naniraka.
Raha izany ny faran'ny herinandro, ny vehivavy dia tokony tsy natombony ny SMS spree rehefa 10 p.m., Afaka manao izany izy ireo, raha tsy mitady ny hahazatra ny.
Manantena ireo soso-kevitra hanampy anao mba hahazo tsara Tinder na lalao amin'ny finday hafa mampiaraka amin'ny asa fampiharana amin'izao fotoana izao. No ataovy azo antoka tsy maimaika zavatra be loatra; hatrany ao an-tsaina ny fomba fiteny taloha: “miadana sy miovaova mandresy ny hazakazaka”.